Otú nyefee camcorder Video ka DVD on Mac / Win (Windows 8 gụnyere)
> Resource> Video> otú nyefee camcorder Video ka DVD
Digital camcorder bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu n'ụlọ ngwaahịa niile oge. Camcorders mere égbè videos a dị mfe, ngwa ngwa na fun ọrụ. Ma eleghị anya, na-enweta ụfọdụ oké camcorder footage gị ụmụaka, nkịta na Harley Davidson. Ma ugbu a chọrọ inwe a footage na gị na PC ma ọ bụ ọbụna tọghata camcorder video ka DVD nke mere na ị na-ekiri na faịlụ na a DVD ọkpụkpọ ma ọ bụ na TV.
Ebe a anyị nwere ike ikwu a camcorder ka DVD burner - Wondershare DVD Creator (Windows 8 na-akwado) n'ihi na gị akwụkwọ. Na ya, ị ga-ahụ ya ezigbo mfe nyefee camcorder vidiyo na DVD nke mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ a àgwà oge-ekiri ihe nkiri gị na ezinụlọ gị n'ụlọ.
Free download camcorder ka DVD burner:
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ike dvd si camcorder vidiyo na Mac-agba ọsọ Mac OS X Snow agụ owuru, odum, Mountain Odum, wdg, na-echigharịkwuru Wondershare DVD Creator for Mac. N'okpuru ebe a bụ iji ọkụ camcorder video ka DVD on PC. Ụzọ ọkụ camcorder video ka DVD maka Mac bụ otu ihe.
Olee otú iji tọghata camcorder video ka DVD nzọụkwụ site nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1. Ibu Ibu camcorder videos
Mgbe camcorder videos na-agafere na kọmputa, na-agba ihe omume na pịa "Import" ka ịgbakwunye camcorder videos ị chọrọ ọkụ ka DVD diski. Mgbe n'idebata niile faịlụ, ị nwere ike ihuchalu videos na nri ị na-elele window.
Nzọụkwụ 2. Họrọ a DVD menu
40 wuru na-free DVD menu ndebiri na-nyere. Ị nwere ike ịhọrọ a DVD menu na hazie DVD menu thumbnails, ndabere oyiyi, buttons, wdg ka amasị gị. Jiri ọkacha mmasị gị music na foto dị ka ndabere music na onyinyo nke DVD menu ka ọ na ihe ahaziri na ihe bara uru.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwekwara ike iji ya gụnyere edezi ọrụ na-ustomize gị videos, dị ka cropping, trimming, n'usoro n'usoro, wdg
Nzọụkwụ 3. Preview na ọkụ camcorder vidiyo na DVD
Ihuchalu DVD oru ngo iji jide n'aka na niile na-aga ziri ezi. N'ikpeazụ, ị nwere ike ịga na "Ọkụ" taabụ na dị nnọọ pịa "Ọkụ" button na-amalite na-ere ọkụ camcorder vidiyo na DVD.
Na-ere ọkụ oge na-adabere na size gị videos. Mgbe okokụre, ị pụrụ itinye camcorder etere on ọkpụkpọ DVD na-enwe gị videos na gị TV ezinụlọ na ndị enyi.
Na-ere ọkụ camcorder video ka DVD Atụmatụ:
Ekpe ohere nke diski ẹwụtde ke diski ohere mmanya na ala; Ị nwere ike ịhọrọ hà na-ere ọkụ DVD n'etiti "DVD-R4.5G" na "DVD-R9.0G"; Ọzọkwa, na mmepụta àgwà dị ruo gị nhọrọ. Ị nwere ike ịhọrọ onye ọ bụla n'ime si atọ nhọrọ: "kwesịrị ekwesị diski", "Ọkọlọtọ video àgwà" ma ọ bụ "High video àgwà".
Ọ bụrụ na gị camcorder bụ a MP4 camcorder dị ka Sony MHSPM1 Webbie na Sony Bloggie Touch n'akpa uwe camcorder, i nwere ike idekọ na-echekwa nza nke MP4 vidiyo na kọmputa gị. Ọ bụrụ otú ahụ, ị nwekwara ike na-aga ebe ịmụta otú ọkụ MP4 ka DVD. Otú ọ dị, ọ bụrụ na gị camcorder ndia AVI videos, dị ka Canon G9 na Nikon Coolpix ese foto, ị nwekwara ike ịmụta otú ọkụ AVI ka DVD.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu Ibu Ibu gị camcorder videos, ị nwekwara ike na-ezo aka a nkuzi: otú nyefee vidiyo si na camcorder gị na kọmputa.
Olee otú mbubata camcorder Videos ka Sony Vegas
HD Video Player: Olee otú Play HD Video